China ROCK RIPPER fekitari uye bhizimisi | Bonovo
Bonovo Rock Ripper inogona kusunungura rakashongedzwa dombo, tundra, rakaoma ivhu, rakapfava dombo uye rakatsemuka dombo rukoko. zvinoita kuti kuchera muivhu rakaoma kuve nyore uye kuve nekubudirira. Iyo Rock Ripper ndicho chakanakira chinongedzo chekucheka kuburikidza chero yakaoma nzvimbo, iyo inosangana munzvimbo yako yebasa nharaunda.
Bonovo Rock ripper inofanirwa kuve yakagadzirirwa kupaza uye kubvarura nzvimbo dzakaomesesa zviri nyore kubvumira kubvaruka kwakanaka pasi pemamiriro ezvinhu akasiyana siyana.Sarudza ripper ine dhizaini dhizaini. Izvi zvichaita kuti shank yako ibvarure zvinhu pane kuirima.Ripper chimiro chinofanira kukurudzira kubvarura kwakaringana. Izvi zvinoreva kuti iwe unozoita nyore, kudzika mapfumo pasina kuisa yakawandisa mutoro pamushini.
Chigadzirwa Muenzaniso Tonnes Kurema Pin
Excavator Ripper BR-60 1-10T Makirogiramu 400-500 50-65mm
Bonovo's rock ripper yakanyatsogadzirwa kuti itange-kubvarura ivhu rakaomeswa nechando, kuvharwa, kana imwe ivhu rakaomarara iro rinopfuura iro bhaketi rinokurudzirwa. Ichi chinamatira chakakwenenzverwa chinogona zvakare kushandiswa kubvisa stumps, midzi, kana re-bar. Iyo Ripper's imwechete poindi zino maitiro akakosha ekupinda kwenzvimbo dzakasiyana dzakaoma.
Iwo anobvambura dombo anogona kutema nepakati pebwe, permafrost, kana chero chinhu chaunokanda pairi.
• Mvura inogwamba nechando
• Ivhu rine matombo
• Kubvisa hunde
Pashure: DZIMA ARM & BOOM
Zvadaro: MITAMBO YOKUEDZESA ROTARY
excavator chando ripper
Excavator ripper zino riri kutengeswa
excavator mudzi ripper
mazaya echando ekuchera
chando mazino e mini excavator
chando zino ripper
hydraulic ripper yekuchera
mini excavator ripper kusungira
mini excavator ripper yekutengesa
mini yekuchera stump ripper
yekuchera bhaketi remugomo
ripper bhaketi rekuchera
ripper shank yekuchera
ripper zino kune mini excavator
mudzi wekubvisa wekuchera mini
LINK-PANE HYDRAULIC THUMB
TILT ZVINOKOSHA COUPLER